Hoy – Page 2 – Wargeyska Waxgarad
August 19, 2018	Falanqayn 1
Inta badan, dhulalka iyo ummaduhuba waxay ku midoobaan qori caaraddii. Marar aan badnaynna ayagoo israba ayay midoobaan. Marar badanna waxaa dhacda inay dawladuhu u kala googo’aan dawlado iyo maamullo. Hore waxaa kala furfurtay dawlado waaweyn sida Cuthmaaniyiintii, Midowgii Soofiyeeti iyo Yuguslaafiya. Haddaan fiirinno sababaha ay ku burbureen kuwaasi, waxaan arkaynaa …
August 17, 2018	Caafimaad 0
Sannadahan danbe waxa aan warbaahinta ka maqalnaa xoolaha Soomaalida oo laga soo celiyo Sucuudiga iyada oo lagu sheegayo inay qabaan cudurka Xummadda Dooxada Rift (Rift Valley Fever), taas oo bulshada Soomaalida ku keenta dhibaato dhaqaale. Haddaba waa maxay cudurkani? Maxaa sababa? Maxay yihiin calaamadaha lagu garto iyo kahortaggiisa? Waa maxay …
August 16, 2018	Sheeko, Sheeko Gaaban 1
“Qabta, marada xagga hoose ka soo mari. Aayar,…. Aaa,.. Yarta duraaxadda u dhig.” Ayay Qaali ku tidhi islaantii ka ummulinaysay oo sacabbada labeenta kaga duwaysa ilmaha yar ee dhashay. Kolkaas ayay iyadoo neeftuuraysa oo laabta gacanta ku haysa furaashkay ku foolatay isku nabtay oo dhabar-dhabar u jiifsatay. Kolkii ay ummushay, …
August 14, 2018	Afkeenna 0
Waxaa beryahan danbe dood ka imaanaysay habka halabuurkii hore haweenka u ammaanay ama adeegsiga halabuurka ee ekeeyayaasha afka kolka la joogo ammaanta dumarka. Suugaantu waa meesha ay ku jiraan oo laga dheehdo laguna kaydiyo dhaqanka iyo xeeldheeraanta afeed ee ay ummadi leedahay. Haddaba, halabuurka Soomaaliyeed kolkuu ammaanayo haweenka wuxuu adeegsadaa …
August 9, 2018	Bulsho, Dhaqan, Falanqayn, Qoyska 0
Kolka aad akhriso hindise sharciyeedka ay Wasaaradda Haweenku soo diyaarisay waxa aad isweydiin doontaa cidda loogu talogalay ee uu khuseeyo waxa ay yihiin diin ahaan iyo dhaqan ahaanba. In dalka loo qoray uu yahay dal reer galbeed ah oo ay dadkiisu ku nool yihiin xorriyad jinsiyeed aan xuduud lahayn, mashaakil …
August 8, 2018	Aragti, Bulsho 0
Marka la dejinayo sharci ama la jaangoynayo siyaasad waxaa muhiim ah in lagu saleeyo nolosha bulshada lagu dabbaqayo sharciga, gaar ahaan, marka sharcigu yahay mid dhaqanka bulshada la xidhiidha. Maadaama waddanku uusan haysanin lacag uu ku bixiyo qoritaanka sharciyada iyo aqoon uu ku qorto sharciyada iyo siyaasadaha ka maqan, inta …
August 4, 2018	Aragti 0
Ilaa bilowgeedii, dawladnimada Soomaaliyeed waxay ku dhisnayd isir. Waxa aynu ku doodaynnay in aynu dadka kale gaar ka nahay oo ay inna mideeyaan isir, af, iyo diin. Waxa aynu halgan u galnay sidii intii Soomaali ku abtirsataa ay isu raaci lahayd, hal dawladna u yeelan lahayd. Kumannaan ayaa halgankaa innagaga …
August 4, 2018	Buug&Bun 0
Akhriska buugga Dr. Hibo Cisat ee Naxwa Cumraanin Jadiid (نحو عمران جديد). Mudnaanta buug uu halmar u wada leeyahay jiil cayiman oo u dhashay ummad waxa qeexa kolba inta uu u jiro qaddiyadaha mudnaanta u leh ummaddaas xilliga uu jiilkaasi nool yahay. Sidoo kale, qoraa gooni ahna xeerkaasi wuu qabanayaa. …